Ndeupi mutengo wepasirese wekuchinja kumanikidza? Changzhou yekumanikidza chinja vagadziri kuti vabatsire iwe kunyatsonzwisisa!
Pane zvinhu zvakawanda muhupenyu hwedu zvinoda kuyerwa kuyerwa, senge chemakemikari, mechina, hydraulic uye hydroelectric zvinoshandiswa zvinoda-chaiyo-nguva yekutarisisa kumanikidza kwavo, asi kana iwo maitiro ekumanikidza akanyanya kureruka kumanikidza kuyera zvishandiso d ...
Ndeupi musiyano uripo pakati pegirazi fiber aluminium foil tepi uye aluminium foil tepi?
A. Ndeupi musiyano uripo pakati pegirazi fiber aluminium foil tepi uye aluminium foil tepi? Girazi fiber aruminiyamu foil jira tepi, uchishandisa yakasarudzika yepamusoro musanganiswa maitiro, iyo ...
Aluminium foil tepi - iyo yemashini tepi iyo inogona "kubhururuka" mudenga
Mumwe mutakuri wekune imwe nyika akashamisika paakaziva kuti vashandi vekuchengetedza nhandare yendege vakanga varova injini injini isati yasimuka. Chiitiko chakatorwa uye chakatumirwa pa internet, zvichimutsa kunetsekana nemibvunzo nezve kuchengetedzeka kwekushandisa tepi kugadzirisa airfram ...
Egret MOPP Tepi.
Egret Tape, yakavambwa muna1997 muChangzhou guta, Jiangsu Province, inovhara nzvimbo inosvika zviuru gumi nezvitatu zvemamita, nenzvimbo yekuvaka yakazara yemamirimita zviuru makumi maviri. Yedu huru yekunamatira zvigadzirwa zvinogona kugoverwa muzvikamu zviviri zvakafara. Yekutanga inonamira tepi nhevedzano: aluminium foil tepi, PE ...
Basa reEPDM chipanji tepi mune butyl kupisa-nemishonga sponge zvigadzirwa uye maitiro ekushandisa
Butyl rabha ine yakanakisa gasi kukwana uye kupisa kupisa, uye inoshandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kweakasiyana-siyana anopisa marabha zvigadzirwa, zvinopisa kupisa chipanje furo rabha zvigadzirwa ndeimwe yacho. Vazhinji vemukati chubhu inogadzira vagadziri vanoziva kuti iyo butyl yemukati ...
Kana zvasvika kune aluminium foil tepi, ndinotenda isu tese tinofanira kuziva nayo, sezvo ichiwanzoonekwa muchikamu chemidziyo yemumba. Chekutanga pane zvese, aruminiyamu foil tepi inogadzirwa neyakaomarara anonamira anonamira, pamwe nehunhu hwealuminium pepi yakakwira ...
Ndeipi tepi tepi?
Tepi dzekupupuma dzinoshandiswa kudzikisira ruzha, kuputira, kuvhara gasket, kutsigisa / padding, uye kuisa chisimbiso uye zvakagadzirirwa kusimudzira kutaridzika uye kugadzirisa mashandiro ese echako chigadzirwa dhizaini. Imwe neimwe furo tepi ine yakasarudzika maficha uye akakodzera zvinangwa. Mamwe matepi aya anowanikwa mune akasiyana ...
Chekutanga pane zvese, iyo tepi yealuminium inogadzirwa nemhando yepamusoro yekumanikidza-inonamira. Uye zvakare, iyo aruminiyamu foil ine hunhu hwepamusoro-tembiricha yekudzivirira uye mweya kubvumidzwa, saka ine yakanaka kupisa kuchengetedza kuchengetedza uye inoratidzira hunhu, iyo inogona kushandiswa muhupenyu hwedu ...